Tartanka shirkadaha shidaalka Soomaaliya & halista ku gadaaman Mustaqbalka – SBC
Tartanka shirkadaha shidaalka Soomaaliya & halista ku gadaaman Mustaqbalka
Posted by editor on Noofember 24, 2012 Comments
Shirkada Genel Energy Plc oo ah shirkad qaabilsan soo saarista shidaalka oo laga leeyahay wadanka Turkiga hase yeeshee ka diiwan Jasiirada Jersey ee hoos tagta boqortooyada UK, xarunna ku leh magaalada London ayaa iibsatey saami dhan 50% soo saarista iyo suuqeynta shidaal la sheegay in laga soo saarayo deegaano ku yaal waqooyiga Galbeed ee Soomaaliya gaar ahaan deegaanada uu maamulo maamulka Somaliland.
Kulamo ka dhacay London, Dubai, Mareykanka iyo Hargeysa ayaa lagu soo gunaaday daah-fur heshiis arinkaasi ku saleysan oo magaalada Hargeysa ay kaga dhawaaqeen masuuliyiin ka tirsan shirkadaha Genel Energy Plc, Petrosoma & Jack Resources kuwaasi oo ku hawlan hawlaha soo saarista shidaalka deegano ka tirsan Somaliland gaar ahaan deegaanka Oodweyne ee gobolka Togdheer & Duleedka magaalada Barbara.
$ 400 Milyan ayay bixinaysaa Shirkada Turkish-ka ah
Shirkada Genel Energy Plc waxay aduun lacageed oo gaaray 400 milyan oo doolar ku bixin doonta hawlaha soo saarista shidaalka oo laga qodayo shan ceel, iyadoo u celinaysa shirkadaha Petrosoma oo ah shirkad arimaha shidaalka qaabilsan oo uu leeyahay nin lagu magacaabo Mohamed Yuusuf oo u dhashay Somaliland iyo Jacka Resources oo ah iyaduna shirkad arimahaasi qaabilsan oo laga leeyahay wadanka Australia.
Mashruuca soo saarista shidaalka Oodweyne Block ayaa waxaa laga qodi donaa sadex ceel oo lagu kala magacaabo SL6, SL7 & SL10, waxaana sida ku xusan warbixin ay daabacddey bogga Internet-ka website shirkada Jacka Resources ay haystaa xuquuqda 50% shidaal barista aaga Block SL6 halka SL7 & SL 10 ay saami ugu leeyahay.
Shirkada Turkiga ee Genel Energy Plc waxay guud ahaan ceelsha shidaalka laga soo saarayo ee Somaliland u qaadatey 50%, shirkada Jacka Resources ayaa iyaduna haysta 30% saamiga, halka shirkada Petrosoma ay leedahay 20% saamiga.
Website-ka shirkada Jacka Resources ee Australia laga leeyahay waxaa ka muuqata qaybta mashruuceeda Oodweyne Block qariirada Somaliland oo laga gooyey Soomaaliya inteeda kale iyadoo sidoo kale calanka Somaliland uu halkaasi ku sawiranyahay, taasi oo uu muujinaysa in shirkadu Somaliland u aqoonsantahay dawlad iyo dal ka madaxbanaan Soomaaliya inteeda kale.
Halkan ka eeg website-ka Shirkada Jacka Resources Ltd
Wakaalada wararka Reutres bishii April ee sanadkan 2012 waxay ku daabacdey bogeeda Internet-ka warbixin ku aadaneyn in heshiis dhexmarey shirkadaha Jacka Recourses iyo Petrosom ay ku kala qaatee saami is le’eg oo ah 50/50 soo saarista shidaalka Somaliland.
Shirkada Petrosoma oo la sheegay in uu madax ka yahay Mohamed Yuusuf waa shirkad ka diiwan gashay dalka Ingiriiska sida ku cad xog dhanka Internet-ka ah laakiin shirkadan oo xitaa aan laheyn website waxaa ugu qoran xogteeda diiwan galinta inay ka diiwan gashan tahay goob laga dukaamaysto (Shoping) oo ah waliba aad u yar oo ay ku yaalaan dhawr dukaan oo xalwada iyo bagaasha lagu gado oo ku taal xaafada Stonebridge ee degmada Brent ee Waqooyiga Galbeed magaalada London.
Shirkada Turkiga & iska indho-tirka Qaranimada Soomaaliyeed
Shirkada Turkiga ee Genel Energy Plc ee Turkiga laga leeyahay website-keeda qaybta hawlaha ay wado iyo meelaha ay wado waxaa ku xusan in ay ka shaqeyso Somaliland, waxaana boggeeda Internet-ka ka muuqata qariirada Somaliland oo laga gooyey Soomaalida inteeda kale, Ogow shirkadan waa shirkad Turkigugu leeyayay waxaana Turkigu xiligan uu aduunka iyo Soomaalida u muujinayaa badbaadada Qaranimada & midnimada Soomaalida.
Sawirka ku jira website-ka shirkada Genel Energy
Laakiin wakaalada wararka Reuters ayaa qortey laba todobaad ka hor warbixinta shidaal baarista shirkada General Energy Plc ay ka bilaabayso deegaanada Somaliland, iyadoo wareysi la yeelatey wasiirka macdanta iyo biyaha ee Somaliland Xuseen Cabdi Ducaale.
Reuters waxay kaloo warbixin kale oo arinkan ku aadan ku xustey in ay ka heshay e-mail qof afhayeen ah oo u Hadley shirkada General Energy Plc kaasi oo lagu magacaabo Andrew Benbow.
“Somaliland waxay leedahay ahmiyad dhuleed oo fursad ah, waxaana rajeynaynaa inaan ka shaqeyno gobolka” ayuu yiri Andrew Benbow.
Shirkada General Energy Plc oo jirta hal sano oo kaliya waxay sheegtey in sahminta shidaal soo saarista ay ka bilaabayso Somaliland sanadka soo socda ee 2013-ka, halka ay filayso in soo saarista shidaalka ay ka bilaabato ceelka koowaad bilaha ugu horeeya sanadka 2014, halka sanadka 2015-ka ceelka labaad shidaal soo saarista laga bilaabayo.
Halkan ka daalaco xogta shirkada Genel Energy ee Somaliland
Warbixin SBC ka heshay ilo wareed oo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in magaalada Hargeysa garoonkeeda diyaaradaha ay soo gaartey diyaarad la sheegay in ay u kireysan tahay shirkadaha Petrosoma & Jacka Recourses, iyadoo diyaaradan oo ah nooca loo adeegsado sahminta shidaal baarista ay sameynayso hawlo shidaal baaris ah oo dhinaca hawada laga sameynayo (an air magnetic gravity survey.
Bisha soo socota ee December 2012 ayaa la filayaa in hawlaha baarista shidaalka ee hawada sare (an air magnetic gravity survey)uu ka bilowdo deegaanada shidaalka laga baarayo ee Oodweyne oo balaaran ahaan dhan 22 kun oo km oo isku wareeg ah.
Dhinaca kalena shirkada Ophir Energy Plc oo ah shirkad laga leeyahay wadanka Ingiriiska ayaa Somaliland heshiis kula gashay soo saarista iyo baarista shidaalka 2 aag oo lagu kala magacaabo SL 9 iyo SL 12 oo ku yaal badda magaalada Barbera, waxaana dhulka shidaalka laga baarayo uu dhan yahay 24,321 km2 oo isku wareeg ah.
Website-ka shirkada Ophir Energy Plc waxaa ku cad in shirkadu 8 wadan oo ka mid ah qaarada Afrika ay ka wado hawlo baaritaan iyo qodis shidaal waxaana sida ku xusan qaybta hawlaha shidaalka ee shirkadaasi ka muuqda in Somaliland wadan ahaan loogu aqoonsan yahay hawlahaasi, iyadoo shirkadan tahay shirkad ka diiwan gashan wadanka Ingiriiska, waxaana arintan ay ka soo hoorjeeda qaraarada Qaramada Midoobay oo ku aadan ilaalinta midnimada dhuleed ee Soomaaliya, wadamada ay shirkadan sheegtey inay ka hawlgasho waxaa ka mid ah xeebaha Senegal iyo Guinea Bissau oo heshiis soo saaris shidaalka ah ka gaaray dhul badeed ku yaal soohdinta ay wadaan, dalalka kale ayaa kala Congo, Gabon, Kenya, Madagascar, Tanzania, Equatorial Guinea & Sadr oo ah Saxaraha Galbeed oo ah wadan madaxbanaanidiisa aanay aqoonsenyn wadamada aduunka oo dhan iyadoo Moroco ay sheegato(Tani waxay muujinaysaa in shirkadahan ay ka faa’ideystaan wadamada qasku ka jiro ama gobolada sheegta inay ka madaxbanaan yihiin wadamadooda).
Riix Halkan si aad u aragto xogta shirkada Ophir Energy Plc ee shidaalka
Somaliland waxaa kaloo lagu wadaa inay dhawaan booqasho ku tagaan saraakiil ka tirsan shirkada Tullow Oil Plc oo ah shirkad xarunteedu tahay magaalada London hase yeeshee lagu aasaasay sanadkii 1985-tii magaalo yar oo lagu magacaabo Tullow oo 35 mile u jirta magaalada Dublin ee dalka Ireland.
Warbaahinta Bloomberg ee fadhigeedu magaalada New York ee dalka Mareykanka waxay qortey in 28-ka bishan November ay booqanayaan Somailland saraakiil ka tirsan shirkada Tullow Oil Plc, iyadoo arintanuu xaqiijiyey wasiirka macdanta iyo biyaha Somaliland Xuseen Cabdi Ducaale oo sidoo kale sheegay in ay ku tala jiraan sidii ay ula gali lahaayeen heshiis dhanka batroolka ku aadan.
Halista heshiisyada shidaal barista & mustaqablka dhaw
Laga soo bilaabo burburkii dawladii dhexe ee Soomaaliya heshiisyo fara badan oo ku aadan khayraadka dabiiciga ah ee dalka ayaa waxaa galey madax kala duwan oo ka tirsan qaybaha siyaasayada iyo maamulada ka jira dalka Soomaaliya, laakiin mushkilada ugu weyn waxay tahay heshiisyadaasi qaarkood waxay halis weyn ku yihiin dhinac kasta oo galey, iyadoo inta badan ay muuqato in heshiisyada siyaasiyiinta Soomaalidu qalinka ku duugaan ay yihiin kuwa ay soo diyaarsadeen dhinaca kale iyagoo loo keeno oo kaliya waraaqo iyo qalin ay tahay in ay saxiixaan halkii ay iyagu wax ka soo diyaarin lahaayeen heshiisyada isfahamka (memorandum of understanding MoU).
Tusaale ahaan heshiisyadii dhacay 1991 ilaa 2012 ee la xiriiray khayraadka Soomaalida intooda waxaa qalinka ku duugay maamulo iyo dawlado KMG ah, iyadoo heshiisyadaasi ay ku noqon doonaan caqabado balaaran in heshiis rasmi ah y gashao dawlad Soomaaliyeed oo dalka oo dhan ka hana qaada.
Bilowga dagaalka Dahabka madow (Black Gold) Saliida
Ruqsadaha baaritaanka iyo soo saarista khayraadka dabiiciga ah ee dalka ee ay bixiyeen maamulada iyo dawladihii kala duwanee ee nidaamka kumeelgaarka ku dhisnaa ee dalka soo marey waxay dhalin doonaan muran iyo isqabqabsi weyn oo keeni kara isku dhacyo military, kuwa siyaasadeed iyo kuwa dhuleed iyadoo murankaasi uu haatan soo xoogeynsayo.
Puntland oo sanadkii hore shirkada African Oil ka bilowdey baaritaan shidaal oo la doonayo in lagu soo saaro shidaal wuxuu keenay in Somaliland ku andacooto in deegaano ay leedahay la doonayo in shidaal laga soo saaro, taasi miyaanay noqon Karin bilowga nooc cusub oo dagaal oo Soomaaliya soo food saara.
Puntland Shidaal ayaa laga baarayaa xagee ku dameeyaa?
Shidaalka laga baarayo Puntland waxaa la qabtey 90 maalmood in lagu soo saarayo, laakiin taasi ma dhicin 900 maalmood ka dib, waxaana la iswaydiinayaa balanqaadkii shirkadu xagee buu ku dambeeyaa?.
Ceelka Dharoor (Puntland) ee shidaalka laga baarayo
Deegaanada Puntland ku dhawaaqdey in laga bilaabay shidaal baarista ee gobolka Nugaal waxay ka mid yihiin deegaanadii ay sahminta shidaal baarista ka wadey shirkadii Conoco, waxaase sanadkii 2005-tii heshiis arimahan ku saleysan la gashay xukuumadii Puntland shirkada Range Resources ee Australia laga leeyahay, iyadoo sidoo kale kula gashay heshiis in dooxda Dharoor ee gobolka Bari sidoo kale ay ka mid noqoto deegaanada shidaalka laga baarayo.
Warbixinta website-ka African Oil ee la xiriirta shidaal baarista Puntland.
Sida ku cad website-yada shirkadaha African Oil oo ah shirkada laga leeyahay wadanka Canada waxay haysataa danaha shidaal baaris ee ceelasha Dharoor & Nugaal 45%, shirkada Red Emperor oo ka hawlgasha Puntland & Georgia oo ka mid aheyd Ruushkii burburray kana diiwan gashan wadanka Ingiriiska waxay haystaa 20% danaha shidaal baarista Punland, halkan Shirkada Range Resources ay leedahay 20%.
Warbixinta shirkada Horn Petroleum
Dawlada cusub ee dhawaan laga dhisay Muqdisho waxay soo wadaa hindise cusub oo ku aadan baaritaanka iyo soo saarista shidaalka Soomaaliya, iyadoo dawladan ay isku aragto dawlad rasmi ah oo ay tahay in looga dambeeyo dhamaan heshiisyada arimahaasi ku aadan.
Duulaanka Kenya & shakiga ku gadaaman
Tuhun xoogan ayaa ku jira hawlgalka military ee Kenya ka wado Koonfurta Soomaaliya, iyadoo farta lagu fiiqayo in uu qayb ka yahay damac la xiriira heshiis shidaal qodis oo Kenya la gashay shirkado ajanabi ah oo laga leeyahay wadamada Norway, Italy, UK iyo Faransiiska.
Heshiiskii guuldareystey ee Kenya la saxiixatey xubno ka mid ahaa xukuumadii hore ee Soomaaliya ee la xiriiray badda u dhaxeya Soomaaliya iyo Kenya wixii ka dambeeyey waxaa soo xoogeysanayey tuhunka ku aadan in Kenya damac ka galay inay shidaal baaris ka sameyso deegaano ka mid ah dhulka Soomaalida oo ku dhaw xuduudeeda.
Warbixino hor u dhac ayaa sheegaya in Kenya heshiis dhanka shidaalka ah la gashay shirkado kala duwan iyadoo kula heshiisay in shidaal laga soo saarao ceelal ku yaal dhul-badeedka Soomaaliya, sida heshiis ay Kenya la gashay shirkada Eni ee Talyaaniga laga leeyahay taasi oo qaadanaysa Aaga (Block) L21, L23 & L24.
Sidoo kale Kenya waxay kula heshiisay shirkada Total S.A ee Faransiiska Aaga (Block) L22, halka shirkada Mareykanka Anadarko Petroleum Corporation ay qaadanayso Aaga (Block) L5, halka shirkada Statoil ee Norway laga leeyahay ay qaadanayso Aaga (Block) L26.
Dawlada Cusub & Hindisaha qorshaha shidaalka
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa xaqiinaya in qorshaha dawlada cusub ay ka mid tahay in dib u eegis lagu sameeyo heshiisyadii khayraadka dabiicaga ah ee Soomaaliya la galey wixii ka dambeeyey 1991-kii, taasina waxay dhalin doontaa muran iyo isku dhacyo dhanka siyaasada ah oo ku noqda cabqad dawladan cusub ee haatan guurguurashada bilowday, tiiyoo aan wali gaarin inay socoto oo taagtaagsato, waxaana jiri doona is maandhaaf ku saleysan qaabkii looga faa’ideysan lahaa khayraadka iyo cida xaq u yeelan karta in ay heshiis gaarto.
Soomaalida dhagahooda waxaa ka guuxayay tan iyo 1950-kii “Dalkiinna shidaal ayaa ceegaaga oo waxaad noqonaysaan bulsho dhaqaale meel ay kala dhigaan wayda”, taasi ma noqon ilaa iyo hada mid soo muuqata, waxaana 30-kii sano ee dawladnimada rasmiga ah la haystey meel kasta oo ka mid ah dhulka Soomaalida cagta mariyey shirkado waa weyn oo laga leeyahay Mareykanka iyo Yurub kuwaasi oo maaweelo iyo hoosaasin looga dhigay Soomaalida in shidaal loo soo saarayo oo sida Carabta shaqo doon loo soo aadi doono.
Dawladaha shirkadihii shidaalka ka baaray Soomaaliya & Ilaalinta danahooda
Hawlihii shidaal barista shirkadihii ay kamid ahaayeen Conoco, Amoco, Chevron, iyo Phillips iyadoo Conoco & Philips ay midoobeen 10 sano ka hor lana baxeen magaca ConocoPhilips ay sameeyeen ogow malaayiin doolar ayaa ku baxdey, waxayna haystaan shirkadahaasi ruqsado dawladeed oo cadeynaya xaq u lahaanshaha barista iyo soo saarista shidaalka, marka xagey kala galayaan heshiisyadaasi iyo kuwa cusub.
Ceel shidaal ay ka baartey shirkada Conoco waqooyiga Somalia
Shaki badan ayaa ku gadaaman sida ay u noqon karto hawl guuleysata hawlaha baaritaanada xiligan, iyadoo la leeyahay shirkadaha waa weyn ee Mareykanku badankood leeyahay ee 50-kii sano ee ugu dambeeyey shidaalka ka baarayey Soomaaliya in dantooda la ilaaliyo waxay xitaa u tahay mowqif cad dawlada Mareykanka, tiiyoo ay ku sii lamaansan tahay damaca wadamada Yurub iyo kuwa kale oo ku aadan sidii loogu tartami lahaa dahabka madow ee Soomaaliya (Shidaalka).
In ummada Soomaaliyeed looga faa’ideeyo khayraadkeeda dabiiciga ah ee EEBE ku maneystey ma ahan wax diimo laga qabo, waxaase ciil iyo caro ah in waraabayaal iyo afmiishaarin dulaalin ah oo dalalkooda ku wareeray ay ka dhigtaan shaqo iyo jahwareerin bulshadan daalan ee diifta colaadeed la kufaa kacaysa.
Hadii loo helo nidaam iyo talo toosan Soomaaliya khayraadkeeda ku dihan, dalkana nabad loo doono kala qoqobka iyo siyaasadeed iyo kan deegaan meel la iska dhigo waxaan shaki ku jirin in la heli lahaa baraare iyo barwaaqo.
Tusaalaha habka qaldan ee ka faa’ideysiga khayraadka wadan.
Dalka Nayjeeriya gobolka ka tirsan ee Niger Delta waa gobolka laga soo saaro badi shidaalka uu hodanka ku yahay wadanka Nayjeeriya, gobolkaasi waxaa ku dhaqan 31 milyan oo qof, shidaalka gobolkaasi laga soo saaro wuxuu dabooli karaa baahida guud ee dhamaan dadka ku dhaqan gobolkaasi hadiiba aanay shaqo tagin oo ay jiif 24-ka saac seexdaan.
Laakiin taasi badalkeedii gobolkaasi wuxuu ka mid yahay meelaha ugu liita xaga nolasha dadka wadankaasi, caafimaad xumo, biyo la’aan, waxbarasho la’aan , colaad iyo dagaal ayay ehel u yihiin, faa’idada khayraadkooda waxay jeebka ugu dhacdaa shirkadaha shisheeye ee ka macaashaya khayraadkoda, waxaana taasi ugu wacan maamul xumada iyo tayo xumada hogaamineed ee dadka maamulka dalkaasi haya.
Tusaalaha ugu wanaagsan ee bulshada khayraadkooda looga faa’ideyn karo.
Dalka Venezuela, waa wadanka shanaad ee ugu badan dhoofinta shidaalka Dunida, wuxuuna safka hore uga jiraa 10-ka wadan ee leh keydka shidaal aduunka.
Iyadoo la adeegsanayo xirfad hogaamin iyo tayo maamul wanaag waxaa la sameeyey in khayraadka wadanka looga faa’ideeyo dadka wadanka .
Madaxweynaha wadankaasi Hugo Chavez wuxuu la soo baxay siyaasad dhaqaale oo uu ku qaramayeey hay’adihii shidaalka qaabilsanaa, wuxuuna mudo ka yar 10 sano ku guuleystey in uu hoos u dhigo shaqo la’aantii iyo in bulshada la maalgaliyo.
Shirkada dawladu leedahay ee Petroleos de Venezuela (PDVSA) waxaa waajib ku ah in 10% dhaqaalaheeda ay ku bixiso maalgalinta bulshada, sanadkii 2007-dii shirkada PDVSA waxay ku bixisay $ 14.4 bilyan oo doolar mashaariic isagu jira dhismaha Isbitaalo, daaweyn iyo baaritaano caafimaad oo lacag la’aan ah, cunto qiimo dhimis huwan, agabka guryaha oo la siinayo deegaanada ay degan yihiin dadka saboolka ah, shaqo abuuris ka baxsan arimaha shidaal soo saarista, Jaamacado iyo barnaamijyo waxbarasho.
Shidaalka ay soo saarto Venezuela iyagu oo qura kama faa’ideystaan, waxay ku siisaa dalka Cuba shidaal gaaraya 100 kun oo fuusto maalint kasta qiime ka jaban 40% qiimaha caadiga ah ee shidaalka dunida, iyadoo taasi badalkeedii ka hesha Cuba in dadka reer Venezuela ay caafimaad lacag la’aan ah ugu safraaan Cuba.
Sidoo kale Cuba waxay u dirtaa Venezuelans sanad kasta 35 ilaa 50 kun oo qubaro caafimaad, Sports iyo cilmiga kale si ay u caawiyaan reer Venezuela .
Hadaba in shidaal la baaro ama khayraad kale laga faa’ideysto wax xun ma ahan laakiin caqligee iyo kartidee Soomaalidu u heli kartaa dad xisaabtan iyo xeeladaysi heshiisyada ku xeel dheer oo aan xumaan reebin, xiiso iyo xaashiyo la saxiixo aan xalkoodu noqon xiiq iyo is xag-xagasho.
Noofember 26, 2012 at 1:12 am
war mawlid walahi cayaar maaha runtii waa arin dhab ah waana wax loo bahnaa in dadku ogaadan wadna ku mahadsantahay
Diseenbar 9, 2012 at 3:03 pm
Waa arrin fiican.
Soomaali oo dhan halkaas ayeey shaqo u doonanayaan ayagoo
baasaboor SOMALILAND wada heysta.
SOMALILAND = DHULKII SOOMAALIYQA = BEYTU SOMALI.
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ama halla ictiraafo ama yaan la ictiraafin, markasta waa DHULKII SOOMAALIYEED…..